Ahoana no manamboatra error -54 ao amin'ny iTunes | Vaovao IPhone
Ao anatin'ireo lesoka maro izay mety ho hitantsika rehefa mampiasa iTunes isika dia tsy misy izay tiantsika ho hita. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanazava ny fisalasalana rehetra mety anananao momba izany hadisoana -54, lesoka iray fahita matetika amin'ny Windows noho ny an'ny Mac, fa amin'ny rafitra fiasan'i Apple dia ho hitantsika izany amin'ny fotoana tsy fahita firy. Amin'ny fotoana maro dia mifandraika amin'ny Trano famakiam-boky iTunes.
1 Ny antony mahatonga ny lesoka -54
2 Ahoana no manamboatra error -54 ao amin'ny iTunes
2.1 Manavao ny rafitra izahay
2.2 Misafidiana trano famakiam-boky indray
2.3 Amboary ny tranomboky amin'ny CrashPlan
2.4 Sakano ny rafitrao amin'ny antivirus anao
2.5 Diovy ny rafitra amin'ny rakitra maloto sy tsy maharitra
2.6 Esory ary avereno apetraka ny iTunes
2.7 Avereno ny fanjakana teo aloha
2.8 Vaovao farany ireo mpamily
2.9 Amboary ny firaketana ny rezistra Windows
Ny antony mahatonga ny lesoka -54
Fampidinana an-kolaka na fametrahana iTunes tsy feno.
Maloto ny tranomboky.
Ny fidirana amin'ny rezistra Windows dia simba noho ny fanovana lozisialy mifandraika amin'ny iTunes (fametrahana na fanesorana).
Virus izay nanimba ny fisie système Windows rafitra na rakitra hafa mifandraika amin'ny iTunes.
Fandaharana iray hafa no namafa hadisoana na fanahy iniana ireo rakitra mifandraika amin'ny iTunes. Amin'ny tranga faharoa dia karazana virus izany.
Manavao ny rafitra izahay
Ny zavatra voalohany hataontsika, toy ny mahazatra, dia ny manamarina raha misy fanavaozam-baovao miandry. Raha manana izany isika dia apetrantsika na dia tsy iTunes aza io.
Misafidiana trano famakiam-boky indray
Ny zavatra hataontsika manaraka dia ny fisokafan'ny iTunes amin'ny alàlan'ny fanindriana ny ALT (Mac) na ny Shift (Windows) ary safidio ny folder "iTunes" hahitana ny tranomboky indray. Azo atao izany fomba izany hiasa tsara indray ny zava-drehetra.
Amboary ny tranomboky amin'ny CrashPlan
Raha simba ny trano famakiam-boky ka tsy afaka mamerina azy amin'ny alàlan'ny fanondroana indray ny làlany isika, dia misy ny fampiharana izay mety hahomby. CrashPlan no iantsoana azy io ary maimaim-poana. Ireto ny dingana hamerenana amin'ny laoniny ny tranomboky miaraka amin'ity programa ity:
Manokatra CrashPlan izahay.
Tsindrio ny Restore.
Hitanay ny fampirimana iTunes.
Tsindrio eo amin'ny birao ny birao hanovana ny toerana famerenana amin'ny laoniny.
Safidio indray ny tranomboky toy ny tamin'ny fomba teo aloha.
Sakano ny rafitrao amin'ny antivirus anao
Ny zavatra manaraka hataontsika dia ny mihazakazaka ny antivirus mba hahazoana antoka fa tsy manana karazana rindrambaiko mety hiteraka lesoka -54 izahay. Raha ny lojika, miankina amin'ny rindrambaiko no hampiasa interface sy rafitra hafa.
Diovy ny rafitra amin'ny rakitra maloto sy tsy maharitra
Amin'ny Mac, fitaovana fanadiovana maimaimpoana tsara dia beryla (karama, CleanMyMac no tsara indrindra). Ho an'ny Windows, ny fitaovana tsara indrindra dia CCleaner. Raha tsy fantatrao tsara izay ataonao dia amporisihina ianao hanao ny fanadiovana fototra indrindra. Raha manadio be loatra ianao, azonao atao ny mamafa ireo rakitra izay ilaina aminao.
Esory ary avereno apetraka ny iTunes
Ho fanampin'ny iTunes, hamafana sy hametraka rindrambaiko mifandraika rehetra ihany koa izahay.
Avereno ny fanjakana teo aloha
Amin'ny Mac, azontsika atao ny mampiasa ny Time Machine hiverenana amin'ny fanjakana alohan'ny fanovana farany natao. Amin'ny Windows, hampiasa ny rafitra famerenana amin'ny laoniny izahay.
Vaovao farany ireo mpamily
Amin'ny fomba mitovy amin'ny rindrambaiko, mety ho ny mpamily efa lany andro ny -54 lesoka. Amin'ny Mac, mandeha ho azy ity, fa amin'ny Windows dia tsy matetika, indrindra amin'ny kinova taloha. Afaka mampiasa ianao DriverDoc ho an'ny Windows, izay hamonjy fotoana, ezaka ary fahasalamana ho anao rehefa mitady azy ireo.
Amboary ny firaketana ny rezistra Windows
Fanamarihana: Noho ny antony fiarovana dia tsy tafiditra ao anatin'io fomba io ny dingana rehetra. Tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataony ny tsirairay raha toa ka mahazo tànana amin'ny firaketana ny rafitra.
Ny firaketana ny fisoratana anarana dia iray amin'ireo zavatra afaka manome antsika volo toy ny spikes, ary tsy mahagaga. Fa hey, eto izahay hiezaka hanazava izay tokony hatao hanamboarana ny fidirana kolikoly izay mety hiteraka ny lesoka -54.
Manoratra "baiko" tsy misy teny nalaina tao amin'ny fikarohana izahay, fa tsy mamaky ny Enter.
Izahay dia mitazona ny fanalahidy Control + Shift ary, izao, manindry Enter izahay.
Ao amin'ny varavarankely, tsindrio ny Eny.
Ao amin'ny varavarankely izay miseho, manoratra "regedit" izahay nefa tsy misy ny teny nalaina ary tsindrio Enter.
Ao amin'ny tonian-dahatsoratra dia misafidy ny fidirana mifandraika amin'ny lesoka isika - 54 (ohatra, iTunes) tianay haverina.
Ao amin'ny menio fisie, misafidy Export izahay.
Ao amin'ny lisitra Save, dia misafidy ny fampirimana izay tadiavinay hitahiry ny fisoratana anarana iTunes fisoratana anarana.
Ao amin'ny boaty Anaran-drakitra dia manoratra anarana ho an'ny fisie nomaninay ho "iTunes Backup" izahay nefa tsy misy teny nalaina.
Ao amin'ny varavarankely fanondranana dia ataontsika antoka fa voamarina ny "Sampana voafantina" ary kitiho ny Save. Ny rakitra dia ho voatahiry miaraka amin'ny extension .reg.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ho an'ny fiarovana sy hanasitranana antsika amin'ny fahasalamana, dia manana ireto dingana manaraka ireto ianao ivelan'ny Actualidad iPhone. Amin'ity rohy manaraka ity dia manana ny torolàlana ho an'ny Windows 7 ianao, saingy nampiasaiko izy ireo ary mitovy ny fomba fiasan'izy ireo.
Amboary ny fidirana fidirana ao Windows 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana no manamboatra error -54 ao amin'ny iTunes
Raha te-jailbreak iOS 9.0.2 ianao dia manavao raha mbola azonao atao